MUFUDZI WECHIGERMAN IMBWA INOBEREKA MIFANANIDZO, 3 - IMBWA
Mufudzi wechiGerman Imbwa Inobereka Mifananidzo, 3
Duke weGerman Mufudzi wembwanana ane mwedzi mishanu ekuberekwa
Imbwa yemufudzi wechiGerman
nhema chena uye shava chihuahua
'Iyi imbwa yangu yemukadzi wechiGerman Mufudzi anonzi Wolfy ane makore matatu nemwedzi misere. Iye akareba masendimita makumi maviri nemasere, aine muviri wakakura uye nevhudzi-jasi-jasi. Ane hasha dzakanaka, uye ane hushamwari kune chero munhu. Ane nzara yekudya. '
Mukadzi wechiGerman Mufudzi imbwa anonzi Wolfy ane makore matatu nemwedzi misere ekuberekwa
'Iyi imbwa yangu Buddy. Iye ane makore maviri okuberekwa kununura kubva kunzvimbo yekuuraya. Iye ndiye anopfira mufananidzo weiyo rudzi uye izvo zvavanoda. Ini ndinotarisa Cesar nguva dzese uye ini ndinotora rairo yake pamusoro pechimiro chembwa inofara, inodzikama ne kufamba naye mamaira mana (4) pazuva pakupera kwevhiki uye maviri (2) mukati mevhiki. Ndichiri kufamba naye ndinomukumbira kuti agare padivi pangu pasina leash uye nemimwe mirairo yakasiyana siyana. Mukudzoka ane rudo uye akazvibata. Iwe haugone kukumbira chipfuwo chiri nani. Zvakare ndine chirwere cheshuga uye kumupa chimiro nekumufamba kunondipa kugadzikana nechirwere changu. Ndezvipi zvimwe zvandingabvunze kubva kwaari? Akaponesa hupenyu hwangu uye haatombozviziva. '
Boo weGerman Mufudzi Imbwa pazera remakore 1 1/2
'Fluffy iyo yeGerman Mufudzi pazera ramakore gumi nerimwe anofarira mahombekombe, kufamba nechikepe, gorofu, Scotland, oat makeke uye kutyaira mumota yake. Fluffy ANONAKIDZWA nesu kubva paakazvarwa. '
gascon bluetick coonhound iri kutengeswa
Fluffy iyo yeGerman Mufudzi ane makore gumi nerimwe ekuberekwa akagara pamberi pechivakwa chekare chebwe
Fluffy iyo yeGerman Mufudzi ane makore gumi nerimwe ekuberekwa kunze kwegorufu corse
Fluffy iyo yeGerman Mufudzi ane makore gumi nerimwe ekuberekwa muchikepe
Libby naLucy vafudzi veGerman - Libby ane makore 1 and uye Lucy mwana ane mwedzi mitatu.
Lenga's Loyalville Von Civik, kubva: Lenga maGerman vafudzi muSouthern California
Uyu ndiCh. Kudzoka kweSilverhill muBlack CD
Shah iyo GSD
'Uyu mufananidzo waTanya. Zvinosuruvarisa, akafa nguva pfupi yadarika, asi aive imbwa yakanaka — pese pataimufamba musango, aipota achicheuka otarisa kumashure kwatiri, kungo tarisa kuti tichiripo here! '
Gunner, ane GSD ane mwedzi gumi nemana anomhanya achitenderera mumakomo eColorado
Gunner iyo GSD
Amber sembudzi yemwedzi mitatu
Munhu mukuru GSD
Mukana, GSD sembudzi ine mwedzi mitatu
Mufudzi wechiGerman Ruzivo
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 1
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 2
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 3
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 4
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 5
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 6
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 7
Mufudzi wechiGerman Mifananidzo 8
Imbwa Dema Dzinotenderedzwa
Asiri-Wolfdogs: Akanganisa Kuzivikanwa
Mufudzi Imbwa: Unganidzwa Vintage Mifananidzo
Mhando dzeMufudzi Imbwa
corgi lab sanganisa zvizere zvakura
cocker spaniel chena uye shava
shiba imi mombe imbwa sanganisa
yero nhema nhema muromo cur imbwa
yuppy puppy imbwa inobata muchina
mifananidzo yesirivha lab puppies